Takariva maizim-bolana tamin'izay. Mainty ny lanitra; toy ny nirarahan'ny ranomainty. Nanarona haizina an'i Frank izany rehetra izany raha nandeha teo amin'ilay arabe babangoan'ny tanan-dehibe izy. Rehefa nandeha kelikely izy dia nandre dian-tongotr'olona nanaraka azy avy tao aoriany, misy olona manaraka azy ao amin'ny maizina ao. Notohizany ihany ny diany na dia efa mihamanakaiky aza ny feon'ilay dian-tongotra. Rehefa nahatratra azy ilay olona ka nifanojo taminy dia niteny hoe: "I Frank mpanonta printy ianao e?"
"Izaho tokoa no izy. Ahoana no nahalalanao ahy?"
"Tsy mahafantatra anao aho kah! Tsy mbola nihaona mihitsy isika. Fa ny rahalahinao no fantatro tsara, ary na dia tao amin'ny maizina aza, ny fihetsikao sy ny famindranao ary ny endrikendrikao dia nampahatsiahy ahy azy ka dia nieritreritra aho hoe ianao ilay rahalahiny. Efa nolazainy ahy mantsy fa manana rahalahy iray izy."
Io tantara io dia maneho fahamarinana iray lehibe tokoa mikasika ny fanompoam-pivavahan'ny Isiraelita atao amin'ny fitoerana masina. Hoy ny Baiboly hoe: aloka, tandindona, endrika, ary sarin'ilay tena izy izany. Na izany aza dia ampy tsara izay nasehon'ny tandindona sy ny sary mba hanambarana mialoha ireo fahamarinana natao hampitainy: dia ny fahafatesan'i Kristy sy ny asa fisoronana ataony ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra.
Indray mitopy maso: Nahoana no tian'Andriamanitra hanorina fitoerana masina ny Isiraelita? Inona no ampianarin'ny fitoerana masina antsika momba an'i Kristy Ilay nisolo antsika? Inona no ataon'i Jesôsy any an-danitra amin'ny maha-Solontenantsika Azy?
Ota, fanatitra, fifandraisana (Heb.9:22)
Ny fomba notendren'Andriamanitra hanesorana ny fahotana sy ny heloky ny mpanota ao amin'ny TT dia ny fanaovana fanatitra biby. Voalaza an-tsipiriany ao amin'ny Lev. 1 hatramin'ny Lev. 7 ny momba ny fanaovana fanatitra teo amin'ny Isiraelita. Notandremana fatratra ny fomba fampiasana sy fametrahana ny rà teo amin'ny fanaovana fanatitra isan-karazany. Ny anjara asan'ny ra teo amn'ny fombafomba fanaovam-panatitra mantsy no anisan'n lafiny niraisan'ireo fanatitra fanaon'ny Isiraelita.
Ny olona izay nanota - ka noho izany, tsy nanaja ny fifanarahana tao amin'ny fenekena, sy nandika ny lalàna mifehy izany - dia afaka miverina soamantsara ho amin'ny firaisam-po tanteraka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitondrany biby atao fanatitra ho solony. Ny fanatitra mbamin'ireo fombafomba fanatanterahana azy no fomba notendren'Andriamanitra hanadiovana ny ota sy ny heloka. Natao hanadiovana ny mpanota izy ireny, ka hamindrana ny fahotana sy ny heloky ny isam-batan'olona ho ao amin'ny fitoerana masina amin'ny alalan'ny famafazana ny rà, sy hamerenana indray ilay olona mibebaka ho amin'ny fifandraisana sy firaisam-po feno amin'Ilay Andriamanitra Mpamonjy ao amin'ny fanekena.
Ahoana no anampian'ireo foto-kevitra voalaza etsy ambony ireo antsika mba hahazoantsika tsara ilay fanontaniana napetraka any amin'ny faran'ny lesona omaly? lnona ilay faminaniana manan-danja lehibe hita ao amin'ireo fanatitra biby ireo? (lsa. 53:4-12, Heb. 10:4).
Ireo fanatitra biby ao amin'ny TT no fomba notendren'Andriamanitra hanesorana amin'ny mpanota ny fahotany sy ny fahamelohany. Ireo no mampiala ny mpanota amin'ny toerana maha-meloka sy mendrika ho faty azy, ho amin'ny toeran'ny voavela heloka sy tafaverina indray amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ao amin'ny fanekena. Kanefa misy heviny ara-paminaniana koa io fanaterana biby atao sorona io. Tsy misy biby rahateo tena mahasolo ny olombelona ka mahavotra azy amin'ny fahotana sy ny fahamelohana. Toy iza no filazan'ny mpanoratra ny bokin'ny Hebreo izany: "Fa tsy mahaisotra ny ota ny ran'ombilahy sy ny ran'osilahy." - Heb. 10:4. Araka izany ny fanaovana sorona biby dia natao ho fiandrandrana ny fiavian'ilay Olombelona sady Andriamanitra, dia Ilay mpanompon'Andriamanitra ho faty eo amin'ny toerantsika, noho ny fahotan'izao tontolo izao. Amin'ny alalan'izany fomba izany no amelana ny heloky ny mpanota sy andraisan'ny Tompo azy, ary dia voaorina ny fototry ny fifandraisana ao amin'ny fanekena.
Meteza ho eo amin'ny toeran'ny olona iray velona tamin'ny andron'ny TT, dia tamin'ny fotoana nanaovana sorona ny biby hatao fanatitra ao amin'ny fitoerana masina. Aza hadino ihany koa fa nanana ny lanjany teo amin'ny toe-karen'izy ireo sy ny kolontsainy ary ny fomba fiainany manontolo ireny biby fiompy ireny. Inona no lesona natao hosintonin'izy ireo avy amin'ireny fanaovana fanatitra ireny mikasika ny sandan'ny fahotana?
Sakaizan'ny fifadian-kanina (Isa.58:1-8)
"Izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika, hanafahany antsika amin'izao miara-belona ratsy fanahy izao, araka ny sitrapon'Andriamanitra Raintsika;" - Gal. 1:4.
Tsy misy isalasalana fa iray amin'ireo lohahevitra fototra (na ilay tena lohahevitra fototra mihitsy aza) ao amin'ny TV ny hoe: i Jesôsy Kristy maty ho fanatitra ho an'ny fahotan'izao tontolo izao. lo fahamarinana io no fototra iorenan'ny drafi-panavotana iray manontolo. Ny teôlojia rehetra izay manda ny ràn'i Kristy ho fanavotana dia manda ny fo sy ny fanahin'ny fivavahana kristianina. Ny hazo fijaliana tsy misy rà dia tsy mahavonjy na iza na iza.
Saintsaino ilay andininy natao hodinihina androany, ary valio ireto fanontaniana ireto: Moa ve i Jesôsy nanaiky ho faty an-tsitrapo? Ho an'iza no nahafatesany? Inona no zavatra tanteraka noho ny fahafatesany?
Ny fisoloana no fototra iorenan'ny drafi-panavotana manontolo. Mendrika ny ho faty isika noho ny fahotantsika. Vokatry ny fitiavany antsika anefa dia "nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika" i Kristy - Gal. 1:4. Maty tamin'ny fahafatesana izay mendrika ho antsika Izy. Ny fahafatesan'i Kristy ho solon'ny mpanota no fahamarinana lehibe ipoiran'ny fahamarinana hafa rehetra. Ny fanantenantsika sy ny famerenana antsika amin'ny laoniny, ny fanantenantsika fahafahana ary fiainana mandrakizay any am-paradisa, dia miorina eo amin'ny asa nataon'i Jesôsy avokoa, dia ny nanolorany ny Tenany ho faty noho ny fahotantsika. Raha tsy nisy izany dia tsy ho nisy dikany ny finoantsika. Angamba ho nametraka ny fanantenantsika sy ny fitokiantsika tamin'ny sarivongana miendrika trondro iray isika. Ny famonjena dia avy amin'ny rà irery ihany, dia ny ràn'i Kristy.
Diniho ireto andininy ireto: Mat. 26:28, Efes. 2:13, Heb. 9:14, 1 Pet. 1:19. Inona no ambaran'izy ireo amintsika mikasika ny rà? Inona ary izany no anjara tanan'ny rà eo amin'ny drafitry ny famonjena?
"Tsy sitrak'Andriamanitra ny hahavery toky anao sy hampahorianao ny fanahinao noho ny fahatahorana fa tsy horaisin'Andriamanitra ianao satria mpanota sy tsy mendrika (...) Azonao atao ny milaza hoe: Fantatro fa mpanota ny tenako, ary izany no ilako Mpamonjy (...) Tsy manana fahamendrehana na fahatsarana aho mba hahazoako mitaky ny famonjena, fa ny ràn'llay Zanak'ondrin'Andriamanitra izay mahaisotra ny fahotan'izao tontolo izao no entiko eo anatrehan'Andriamanitra. Izay ihany no angatahiko."' - FLB, t. 100.
Saintsaino io andalana nosoratan'i Ellen White io. Soraty araka ny fandraisanao azy izany. Raiso ho an'ny tenanao manokana izany. Apetraho ao ny tahotrao sy ny ahiahinao, dia soraty hoe inona no omen'ireo teny fikasana voarakitra ao ho anao. Inona no fanantenana ao am-ponao noho ilay ràn'ny fanekena?
Ilay mpisoronaben'ny fanekena vaovao
Ilay fitoerana masina teto an-tany, izay nofidin'Andriamanitra honenana teo amin'ny olony, dia nifantoka tamin'ny fanaovana sorona ny biby. Kanefa tsy nifarana hatreo amin'ny fahafatesan'ireny biby ireny tsy akory ny fanompoam-pivavahana natao. Rehefa voavono ny biby dia mbola manao fisoronana amin'ilay rà ao amin'ny fitoerana masina ny mpisorona, ho an'ny mpanota.
Aloka fotsiny ihany, tandindon'izay hataon'i Kristy ho an'izao tontolo izao anefa izany fanompoam-pivavahana rehetra izany. Araka izany, tahaka ireo tandindona koa (dia ny fanompoana tao amin'ny fitoerana masina), izay tsy nifarana hatreo amin'ny fahafatesan'ny biby, dia tsy nifarana hatreo amin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana tsy akory ny asan'i Kristy ho antsika.
Diniho androany ny Heb. 8:1-6. Ento amim-bavaka izany. Angataho ny Tompo mba hanampy anao hahatakatra izay voambara ao sy ny antony maha-zava-dehibe ny fahalalantsika izany. Rehefa vitanao izany dia soraty araka ny filazanao azy izay heverinao ho hafatry ny Tompo amintsika ao amin'ireo andininy ireo. Apetraho amin'ny tenanao koa ny fanontaniana hoe: Ahoana no anampian'ireo andininy ireo antsika hahatakatra ny momba ny fanekena vaovao?
Tahaka ny nisian'ny mpisorona sy ny asa fisoronana tao amin'ilay fitoerana masina teto an-tany tao anatin'ilay fanekena taloha, no isian'ny mpisorona sy ny asa fisoronana koa any amin'ilay fitoerana masina any an-danitra, ao anatin'ilay fanekena vaovao. Izay aloka sy tandindona ary sary fotsiny ihany (Heb. 8:5) tao amin'ilay fanekena taloha dia manjary zava-misy ao amin'ilay vaovao.
Koa tsy biby tsy mahalala na inona na inona no misolo antsika, fa i Jesôsy Izay tsy nanana ota kosa. Tsy ràm-biby fa ràn'i Kristy. Tsy fitoerana masina nataon-tanan'olombelona fa "ny tena tabernakely, izay naorin'ny Tompo, fa tsy olona" - Heb. 8:2. Ary tsy mpisoronabe olombelona mpanota mety diso no manao fanompoana fanelanelanana ho antsika fa i Jesôsy. Raiketo ao an-tsaina izany rehetra izany, ary saino ity voalazan'i Paoly ity: "Hataontsika ahoana no fandositra, raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika?" - Heb. 2:3.
Eritrereto izao: nanana fiainana tsy nisy ota i Jesôsy ho anao, maty ho anao Izy, ary any an-danitra Izy ankehitriny manao fanompoana ao amin'ny fitoerana masina ho anao. Izany rehetra izany dia natao hamonjena anao ho afaka amin'ireo vokatra mahatsiravin'ny fahotana amin'ny farany. Alamino ny fandaharam-potoanao ka ataovy izay hiresahanao amin'ny olona izany vaovao mahafinaritra loatra izany rahampitso na amin'ny andro manaraka, dia amin'ny olona izay heverinao fa mila mandre izany. Omany mialoha izay holazainao, araka izay hitanao tao amin'ny lesona androany.
Asa fisoronana any an-danitra (Heb.9:24)
Diniho ny Heb. 9:24, indrindra ao anatin'ny tontolon-kevitra izay nanomezana azy, dia izay manazava ny fanompoana ataon'i Kristy any an-danitra ho antsika taorian'ny nahafatesany ho antsika. Na maro aza no azo lazaina dia ilaintsika ny hifantoka amin'ity teboka tokana ity: dia ilay ampahany farany izay milaza fa miseho eo anatrehan'Andriamanitra i Kristy ankehitriny ho antsika.
Saintsaino ny hevitr'izany. Isika olombelona lavo sy mpanota, isika izay ho levona raha manatrika ny famirapiratan'ny voninahitr'Andriamanitra ankehitriny; na ratsy sy mpandika ankitsirano ny didin'Andriamanitra toy inona aza isika, dia manana Olona Izay miseho eo anatrehan'Andriamanitra ho antsika. Manana Solontena isika, Izay mijoro ho antsika eo anatrehan'ny Ray. Saintsaino ny haben'ny fitiavan'i Kristy sy ny famindrampony ary ny fahari-pony fony Izy teto an-tany. Izy ihany no Ilay Mpanalalana antsika any an-danitra ankehitriny.
Ampahany iray hafa amin'ny vaovao mahafaly koa izany. Tsy vitan'ny nandoa ny onitry ny fahotantsika i Kristy, sy nitondra ireny tamin'ny Tenany teo ambonin'ny hazo (1 Pet. 2:24), fa mijoro eo anatrehan'ny Ray koa Izy ankehitriny, Mpanalalana amin'ny lanitra sy ny tany, amin'ny olombelona sy amin'Andriamanitra.
Misy heviny mitombina avokoa izany. I Jesôsy amin'ny maha-olombelona sady Andriamanitra Azy (dia olona tonga lafatra, tsy nanana ota) no hany afaka manafoana ilay hantsana izay mampisaraka ny olombelona amin'Andriamanitra noho ny fahotana. Ny tena zava-dehibe tsy maintsy tadidiana ao anatin'izany rehetra izany (na dia misy betsaka aza izy ireny) dia izao: misy Lehilahy, Olombelona iray, Izay mahatsapa lalina ny fisedrana rehetra lalovantsika, ny fahoriana sy ny fakam-panahy mahazo antsika (Heb. 4:14,15); misolo tena antsika eo anatrehan'ny Ray Izy amin'izao fotoana izao.
"Fa iray no Andriamanitra, ary iray no Mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesôsy , izay olona, sady nanolotra ny tenany ho avotra hisolo ny olona rehetra, dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao." - 1 Tim. 2:5,6. Inona avy ireo andaikitra roa sahanin'i Jesôsy voalaza ao amin'ireo andininy ireo? Fomba ahoana no nanehoana mialoha ireo andraikitra ireo tamin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny fitoerana masina teto an-tany?
Ny vaovao lehibe momba ny fanekena vaovao dia ity: ankehitriny, noho i Jesôsy, dia manana Olona misolo tena azy any an-danitra eo anatrehan'ny Ray ny mpanota izay mibebaka, Olona Izay nividy ho azy ireo zavatra izay tsy ho voavidin'izy ireo na oviana na oviana amin'ny herin'ny tenany. Tsy inona izany fa ny fahamarinana tanteraka, dia ilay fahamarinana hany afaka hijoro eo anatrehan'Andriamanitra. I Jesôsy, Izay nanana io fahamarinana tanteraka io teo amin'ny fiainany noho ny fiaretany fahoriana (Heb. 2:10, DIEM), no mijoro eo anatrehan'Andriamanitra, mangataka famelan-keloka ho antsika sy fanafahana amin'ny fangejan'ny ota; raha tsy izany dia tsy misy fanantenana ho antsika ankehitriny, indrindra moa fa amin'ny andro fitsarana.
Mivavaha, ary saintsaino ny hoe: mijoro eo anatrehan'Andriamanitra any an-danitra ny Olombelona iray, dia Olona Izay efa nalaim-panahy koa hanota. Inona no hevitr'izany ho anao manokana? Fanantenana sy fampaherezana manao ahoana no entin'izany?